Category: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | Invest Myanmar Summit 2019
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု / By zawgyi
၂၀၁၉ မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို တွေ့မြင်ရတော့မည် ဟု DICA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြောကြား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦးက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံက ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေသလဲ၊ မြေပိုင်ဆိုင်ရယူမှုနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ၂၀၁၉ တွင် ပိုမို ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် သူဘာကြောင့် မျှော်လင့်ထားသည်ဆိုသည်တို့ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဦးစားပေးကဏ္ဍတွေက ဘာတွေလဲ။ ဟိုအရင်က ဦးစားပေးတွေနဲ့ ဘာခြားနားမှုရှိလဲ။ ဖြေ။ ။ ၂၀၁၂ ခု အထိ ကျွန်တော်တို့မှာ သီးသီးသန့်သန့်ဦးစားပေးရယ်လို့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၂ ကစပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ကဏ္ဍတွေအပေါ် မူတည်ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေ ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိကကဏ္ဍ ၄ ခု ရှိပါတယ် – ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပါပဲ။ …
၂၀၁၉ မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို တွေ့မြင်ရတော့မည် ဟု DICA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြောကြားRead More »
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ဒု-ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင် – စီမံကိန်းဘဏ်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြင့်တင်ပေးမည်
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသည် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုရှိပြီး အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်သည့် အွန်လိုင်းစီမံကိန်းဘဏ်တစ်ခုစတင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိပြီး စီးပွားရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ် ကောင်းမွန်သည့်သက်ရောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် အစိုးရက စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသည့် ဦးစားပေး ဦးဆောင်ဦးရွက်အစီစဉ်များလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းအစီစဉ်များမှာ ဝန်ကြီးဋ္ဌာနများက စီမံကိန်းများကို ဖော်ထုတ်ဈေးပြိုင်ကမ်းလှမ်းသည့်နည်းအား အစအဆုံးပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်ပြီး အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကဖက်စပ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် မူဘောင်သစ်တစ်ခုကို ချမှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းဘဏ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)နှင့် ပေါင်းစည်းမှု၊ အစိုးရ၏ ရယူမှုအပေါ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်သက်ရောက်မှုနှင့် တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြန်ကဲ့သို့ နိုင်ငံကဦးဆောင်သည့် အခြားစီမံကိန်းများနှင့် မည်သို့အံဝင်ပုံတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ဒု-ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ Invest Myanmar Summit 2019 ၏ ဒုတိယနေ့တွင်လည်း ပြည်သူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းဘဏ် (National …
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ဒု-ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင် – စီမံကိန်းဘဏ်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြင့်တင်ပေးမည်Read More »
The breakdown of gross domestic product (GDP) by sector illustrates the composition of an economy. In Myanmar, this data is collected by the Ministry of Planning and Finance’s Central Statistical Organization. By comparing GDP across sectors and over time, we can see how the composition of Myanmar’s economy has changed since economic and political reforms …
Myanmar’s Economy: The GDP BreakdownRead More »
ဈေးကွက်စွမ်းရည်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဈေးကွက်တွင်လာရောက်မြှုပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိသည်။ လတ်တလော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှာ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံများတို့မှဖြစ်ပြီး အခြားသောနိုင်ငံအမြောက်အများမှလည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိသည်။ The Myanmar Times
“ Hong Kong is the 4th largest investor and major trading partner of Myanmar” – U Thaung Tun. With the Myanmar Government confirming visa exemptions for Hong Kong passport holders and improving on current Myanmar’s investment regulations, the two countries are working towards the next step in welcoming Hong Kong investors. Read more here. Photo …